AS-TA-MA Waxay Noqotay Wadooyinka Caasimadda | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraAS-TA-MA waxaa la bilaabay in loo isticmaalo wadooyinka caasimada
09 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Asphalt News, SAWIRADA, GUUD, WADADA, TURKEY
Ace wuxuu bilaabay in loogu adeego wadooyinka caasimada
Waaxda Cilmiga Masaafada ee Magaalada Ankara waxay bilawday inay isticmaasho Mashiinka Asphalt Repair Machine, oo isagu iskiis u soo saaray isla markaana loogu magac daray AS-TA-MA, wadooyinka caasimada. AS-TA-MA waxay hagaajineysaa ciladaha ku dhaca asphalt waqti gaaban, galaya meelaha makiinadaha waaweyn aysan geli karin, soo jiidashada muuqaalkeeda astaamaha deegaanka iyo dhaqaalaha.
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa jabisay dhul cusub.
Dowlada Hoose ee Magaalada, oo mid cusub ku soo kordhisay codsiyada soosaaro iyo keydinta, ayaa sameysay mashiinka dayactirka ee loo yaqaan "asphalt".
ASPHALT MACHINE wuxuu soo saaray SHAQAALAHA METROPOLITAN: AS-TA-MA
Mashiinka asphalt AS-TA-MA, oo ay soo saareen kooxda R&D ee Wasaaradda Arimaha Sayniska, iyadoo lala kaashanayo shirkad gaar loo leeyahay ee OSTİM Aagga Wershadaha iyo adeegsiga tasiilaadka guryaha, ayaa bilaabay in lagu isticmaalo waddooyinka Başkent.
AS-TA-MA, oo hagaajisa dillaacyada iyo cilladaha ka dhaca asphalt dartiis sababao kala duwan awgood oo galaan meelaha ay mashiinnada waaweyn galaan, waxay soo jiidataa muujinta muuqaalkeeda dhaqaale iyo deegaanka.
XANUUN BADAN OO LAGU KARO
Teknolojiyaddan, oo si weyn looga isticmaalo Maraykanka iyo Ruushka, ayaa dayactir dusha ka saaraysa jidadka iyo jidadka Ba ofkent markii ugu horraysay.
Mashiinka dayactirka asphalt ee ay sameeyeen kooxda R&D ee Wasaaradda Sayniska waxay leedahay muujinta loo isticmaalo dhammaan xaaladaha xilliyeed, oo ay ku jiraan cimilo roobaadka. Ka shaqeynta mabda'a dib u adeegsiga hada jira, AS-TA-MA si dhakhso leh oo ficil ahaan ayey dib ugu qaabeeyaan sagxadda asfalka iyadoo la kululeynayo.
In kasta oo nooca warshadaha ee AS-TA-MA ay shaqeyn karaan 30 saacadood oo leh tuubbo boqol-litir ah, wadada waxaa loo furi karaa taraafikada waqti gaaban kadib markii la hagaajiyo.
SHAQAALAHA CAAFIMAADKA KELIYA 3 SAACAD
Iyada oo loo adeegsanayo qaabka 'Classical', dayactirka asphalt ay sameeyeen 13 shaqaalaha gudaha 6 daqiiqo oo ay leeyihiin 33 gaadiid oo kaladuwan ayaa kaliya lagu qaban karaa 3 daqiiqo iyo 23 daqiiqadood AS-TA-MA.
Mashiinka, oo loogu talagalay in lagu meeleeyo mashiin laba jibaarka ah marka ugu horeysa, waxaa la soo saari doonaa hal mashiin oo naqshadeysan marxaladda soo socota. Naqshaddan cusub, 23-ka daqiiqad ee dayactirka asphalt waxaa la qorsheeyay in ay hoos u dhacdo illaa 8-10 daqiiqadood, iyo ka dib soosaarka ballaaran, dhammaan taliyayaasha ku xiran Howlaha Sayniska waxaa laga siin doonaa mashiinadan.
Qalabka qashinka ah ee boodboodka ah ee sugaya in la isticmaalo
Wadooyinka waawayn waxay buuxiyaan indhaha
Qeybta sare ee loo yaqaan "Overlund", oo la bilaabay in lagu dhiso Saldhig Tababarka Izmit, ayaa sugayay bilo
Xisaabinta ayaa bilaabatay madaarka caasimadda
Xilliga Gaadiidka aan kala joogsi lahayn ayaa lagu bilaabay caasimadda
Ukraine waxay soo jeedineysaa Azerbaijan in ay ka qeyb qaadato Mashruuca Tareenka Viking
buundada ugu dheer tareenka Turkey ayaa diyaar u ah in ay furitaanka gaadiidka | Elazig-Malatya
RayHaber 09.03.2020 Warbixinta Shirka